Verdinas miaraka am-baody - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
legioma791 minitraOlona 2450 kaloria
Ireto veratra ireto miaraka amin'ny makamba dia platazo tena izy feno tsiro izay hankafizanao ny hatsarana. Lavorary mba hankafizanao ny fahandroana mahandro fahandro amin'ny fomba mahandro sakafo ara-pahasalamana.
Legume dia tena mora ny mahandro, na dia tsy maintsy ho azonao antoka fa ny ny akora dia misy kalitao ka ny vokany dia tsaramaso iray tsara, feno tsiro.
Tsy misy isalasalana fa fomba fahandro tsotra sy nentin-drazana toy ireo nataon'ireo renibenay izay mamelona ny vatana sy mampionona ny fanahy.
1 Verdinas miaraka am-baody
2 Te hahafantatra misimisy momba ny verdinas miaraka amin'ny udd ve ianao?
2.1 Ampifanaraho amin'ny maodely Thermomix anao ity fomba fahandro ity
Lovia matsiro izay hankafizanao ny fomba fahandro mahazatra.
Fotoana fiomanana: 12H
Fotoana hiketrehana: 1h 11M
Fotoana manontolo: 13h 11M
Ho an'ny tahiry
Menaka 40 g
Rano manana kalitao 500 g
Ho an'ny veritra
Rano manana kalitao 100 g
Andro iray talohan'ny nametrahantsika ireo legioma tao anaty lovia ary norakofantsika rano be. Avelantsika hilona eo anelanelan'ny 8 sy 12 ora izy ireo.
Ny ampitson'iny dia esorinay ireo sambo-pasika mamela ny rambony mba tsy hiraraka izy ireo.
Apetrakay ao anaty vera ny loha sy ny hoditra, ampio ny menaka ary andrahoy 5 minitra, 120º degre, hafainganana 2.
Ampianay ny rano sy sira kely kely. Izahay dia manao fandaharana 15 minitra, maripana 100º, hafainganam-pandeha 2.
Aorian'ny fotoana, sakano ny tahiry amin'ny alàlan'ny fantsom-bokotra tery sy tahiry.
Miaraka amin'ny taratasy an-dakozia dia esorinay amin'ny vera ny sisa tavela amin'ny stock fa tsy manasa azy izahay mba tsy hahavery ny vatan'ny ron-kena.
Ariantsika ny rano amin'ny legioma ary alainay tsara. Napetrakay tao anaty vera izy ireo niaraka tamin'ny tongolo madio, karaoty sy hoka ary ampahany lehibe. Manampy rano sy programa 100 g izahay 5 minitra, 100º, hafainganan'ny sotro, fihodina ankavia.
Rehefa mafana ny rano dia ampio ny tahiry mandra-rakotra azy ary andramo 40 minitra, 100º, hafainganan'ny sotro, fihodina ankavia.
Mandritra ny fandrahoana sakafo dia hijerentsika ny verdinas mba tsy ho lany ron-kena.
Rehefa malemy ny veritra dia arotsakay tsara izy ireo mba tsy ho vaky. Ka hananantsika ny veritra amin'ny lafiny iray ary ny ron-kena amin'ny lafiny iray.
Averinay ao anaty vera indray ny ron-kena miaraka amin'ny leek, ny karaoty ary ny tongolo. Torotoro izahay mandritra 1 minitra, hafainganam-pandeha 10. Raha hitantsika fa nanjary matevina izy io dia afaka mampihena izany amin'ny alàlan'ny fampidirana tahiry bebe kokoa.
Ampio ny verdinas ary ampio ny udangom-boankazo voatahiry hatramin'ny voalohany. Izahay mahandro sakafo 5 minitra, 100º, hafainganan'ny sotro, fihodina ankavia.
Nozarainay tamin'ny takelaka lalina ny verdinas sy ny udno ary atsofohy avy hatrany.
Azo atao ny manalava ny fotoana amin'ny teboka faha-8. Aza adino ny manampy tahiry sy programa amin'ny fotoana andramanao, miaraka amin'ny hafanana sy ny hafainganana mitovy. Aza adino ny fihodina ankavia.
Te hahafantatra misimisy momba ny verdinas miaraka amin'ny udd ve ianao?
Verdina dia karazana tsaramaso mahazatra avy any Asturias ary izany koa dia nitombo tao The Mariña Lucense. Ampiasaina ambonin'izany rehetra izany izy mba hiomanana amin'ny trondro sy trondro, na afangaro na amin'ny udd, clams, udd ihany ...
Hiavakao tsara amin'ny sisa amin'ny legioma izy satria izy io kely, fisaka, manana hoditra tena tsara ary miloko maitso tsara izay mampiavaka indrindra.
Ny hoe maintso izy ireo dia tsy midika hoe vaovao, fa efa nangonina fotsiny tsy matotra raha mbola manana sapany betsaka izy ireo izany no mahatonga azy ireo hanana loko manaitra toy izany.
Raha ny marina, amidy maina ny veritra ary, hahazoana azy ireo dia tsy maintsy mankany ianao tsena sy fivarotana manokana na mividy an-tserasera.
Rehefa maina izy ireo dia tsy maintsy alentikao mandritra ny adiny 8 farafahakeliny. Ary tadidio fa ny fotoana fandrahoana sakafo dia hiankina amin'ny faharetan'ny naharetany, izany hoe, arakaraky ny maha-antitra azy ireo no vao ilain'izy ireo.
Araka ny efa nolazaiko teo dia afaka miaraka amin'izy ireo ianao amin'ny karazan-trondro sy hazan-dranomasina. Manomana azy ireo matetika aho vano na saoka. Ny tsaramaso dia manana tsiro mahery indrindra ary ny hena dia manana hena betsaka kokoa saingy ny iray amin'izy roa dia mandeha tsara amin'ny fomba fahandro.
Sady an-tsaha na an-tsaha mahandro haingana be izy ireo ka alohan'ny hanampiana azy ireo dia manoro hevitra anao aho mba ho azo antoka fa efa vonona ny verina.
tsarovy mety haharitra ela kokoa noho ny voalaza ao amin'ny fomba fahandro. Mila manala azy ireo fotsiny ianao ary manome fotoana bebe kokoa azy ireo ary ho hitanao ny fomba ahazoanao ny teboka tonga lafatra feno tsiro.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Sakafo rezionaly, legioma
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Sakafo rezionaly » Verdinas miaraka am-baody
Mofo voadidy miaraka amin'ny menaka tanamasoandro
Sakafo cannelloni miaraka amin'ny saosy piquillo